Qalliinyaqaan Muslim ah oo loo aqoonsaday hal-curiyaha sanadka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Qalliinyaqaan Muslim ah oo loo aqoonsaday hal-curiyaha sanadka.
Qalliinyaqaan Muslim ah oo loo aqoonsaday hal-curiyaha sanadka.
Posted by: radio himilo September 30, 2017
Muqdisho – Qalinyahan Muslim ah oo ku nool Mississauga ayaa ku guuleystay abaal-marinta hal-curiyaha sanadka 2017 – oo ah mid ay bixiso Iskaashatada EPSO laguna aqoonsado howlkarnimada iyo qalliimada daweynta cudurrada aadka ugu daran indhaha.
Wuxuuna kamid ahaa dadka ugu firfircoon ee xerada qalliimada indhaha looga danbeeyo sanadihii dhawaa. Si kastaba, sanadkii 2010, Ahmed waxaa laga mid dhigay 40-ka dhaqaatiir ee ka yar da’da 40-jirka oo ugu fiican dalka Kanada.